ဘာကြောင့် ယောက်ျားအများစုဟာ မိန်းမတွေရဲ့စကားကို နားမထောင်ကြတာလဲ? – Alanzayar
ဘာကြောင့် ယောက်ျားအများစုဟာ မိန်းမတွေရဲ့စကားကို နားမထောင်ကြတာလဲ?
ဘာကြောင့် ယောက်ျားအများစုဟာ မိန်းမတွေရဲ့စကားကို နားမထောင်ကြတာလဲ? ယောက်ျားအများစုဟာ မိန်းမတွေရဲ့စကားကို ဘာ့ကြောင့် နားမထောင်ကြတာလဲဆိုရင် ဒီအချက်တွေကြောင့်ပါ။
၁။ မိန်းမတွေက စကားများလွန်းတယ်- သိပ်ကို အခြေခံကျတဲ့ အချက်က မိန်းမရဲ့ စကားများလွန်းတဲ့ အခြေခံဗီဇ ပါပဲ။ “ကျောပူတာပဲ ခံနိုင်မယ်။ နားပူတာတော့ မခံနိုင်ဖူး” ဆိုတဲ့ ယောက်ျားတို့ရဲ့ ဝသီ အတိုင်း သိပ်ကိုများလွန်းတဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ စကားလုံးတွေဟာ ယောက်ျားတွေကို နားလျှံသွားစေတာ မဆန်းပါဘူး။
၂။ ယောက်ျားတွေက သိပြီးသားလို့ ယူဆတယ်- မိန်းမဘက်က အချစ်ရေးအကြောင်း ပြောမလား? အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း ပြောမလား? နားလည်မှု? ခွင့်လွှတ်မှုနဲ့ သစ္စာတရား? ယောက်ျားအားလုံးနီးပါးက ဒါတွေကို သူတို့နားလည်ပြီးသားလို့ ယူဆကြပါတယ်။ သင်ပြောလည်း အပိုလို့ ယူဆနေတတ်ပါတယ်။
၃။ မိန်းမတို့ရဲ့ ဗြစ်တောက် ဗြစ်တောက်- မိန်းမတွေဟာ အကြောင်းအရာေ ပါင်းစုံကို တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ ပြောတတ်တဲ့ အကျင့် ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ သူတို့ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို သူတို့ပဲသိပြီး တစ်ဖက်က ယောက်ျားလေး နားလည်အောင် မပြောတတ်ပါဘူး။ အကြောင်းအရာတွေ၊ ခံစာမှုတွေကလည်း များလွန်းတဲ့ အတွက် လိပ်ပတ်လည်အောင် မပြောနိုင်တော့ဘဲ ယောက်ျားတွေအတွက် ဗြစ်တောက်ဗြစ်တောက် အသွင်အဖြစ် ပြောင်းသွားပါတယ်။
၄။ ယောက်ျားတွေက ချုပ်ချယ်တာ မကြိုက်ဘူး- လူတွေရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက် အရ တော်တော်များများဟာ ချုပ်ချယ် နှောင်ဖွယ်မှုကို မကြိုက်ပါဘူး။ လွတ်လပ်မှုကို လူတိုင်း မြတ်နိုး ကြပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ ယောက်ျားတွေဟာ ချုပ်ချယ်တာ လုံးဝ (လုံးဝ) မကြိုက်ဘူး ဆိုတာကို မိန်းမတွေ သိသင့်ပါတယ်။
၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသော ယောက်ျားတွေဟာ လွတ်လပ်မှုကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ရှာလေ့ရှိပါတယ်။ မိန်းမကို ပိုင်တဲ့ယောက်ျားက ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပဲ ချုပ်ချယ်တာမကြိုက်ဘူးလို့ ပြောလိမ့်မယ်။ မိန်းမကို မပိုင်တဲ့ယောက်ျားက သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ချုပ်ချယ်မှုတွေက လွတ်အောင် နေလိမ့်မယ်။
၅။ စကားလုံးတွေအောက်က ဖိအားဒဏ်တွေ- မိန်းမတွေရဲ့ ခံစားမှုတွေဟာ သည်းခံရခက်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်လာရင် ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မဆိုင်သည်ဖြစ်စေ အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကို ပြောပြီး အနိုင်ယူဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ယောက်ျားတွေ အတွက်ကတော့ သိပ်ကိုဆိုးရွားတဲ့ ဖိအားပါပဲ။ ဒီလိုပြောနေတာဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို နားဝင်ဖို့ဝေးစွ၊ အနားနေချင်အောင်တောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
၆။ ယောက်ျားတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုဟာ ခဏပဲ- မိန်းမတွေ သိသင့်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်က တစ်ချို့ယောက်ျားတွေက စကားနားထောင်တဲ့ အခါမှာ ခဏပဲအာရုံစူးစိုက်မှု ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိတ်မြန်တဲ့ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေရဲ့ မပြီးနိုင်မစီးနိုင်တဲ့ စကားတွေကို အချိန်အကြာကြီး စူးစိုက် နားမထောင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ မိန်းမတွေကို မချစ်လို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဂရုမစိုက်လို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချက်ကိုတော့ မိန်းမတွေဘက်က နားလည်ပေးသင့်ပါတယ်။
၇။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင် ပြောပါ- မိန်းမတွေရဲ့ ပင်ကိုယ်အတတ်ပညာထဲမှာ ယောက်ျားလေးတွေကို ကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင် ဘယ်လို စည်းရုံးရမလဲဆိုတာ မသင်ဘဲလဲ တတ်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေစိတ်က အချော့ကြိုက်ပါတယ်။
ကောင်းကောင်းပြောရင် လက်ခံပြီး၊ ရှင်းရှင်းပြောရင် စိတ်ရှည်ပါတယ်။ အော်ဟစ်နေတဲ့ မိန်းမကို ဘယ်ယောက်ျားကမှ စိတ်ထဲ တကယ်မထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အပြောချိုချိုနဲ့ မိန်းမကတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ပြောပြလို့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံး နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ကတော့ မိန်းကလေးတွေဟာ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ တစ်ဖက်သား နားဝင်စေမယ့် အနေအထားနဲ့ ပြောသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုလိုက်ပြီး ပြောချင်တာတွေကို ပြောချင်သလိုပြောနေရင်တော့ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယောက်ျားလေးတွေကတော့ ကိုယ့်ကောင်မလေး ဘာကိုဆိုလိုချင်သလဲ ဆိုတာကိုသာ သိအောင်ကြိုးစားရင်း စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သာ ပြောတာတွေကို သည်းခံနားထောင်ပေးပါ။ Crd
Previous Article အားလုံးအတူတူသွားရမယ့်လမ်းဖြစ်တာကြောင့် အခုချိန်မှာ အရေးကြီးဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်နေတိုး
Next Article ဆက်လက်အသက်ရှင်ရန် ခွဲစိတ်ကုသမူ့တွေ ပြုလုပ်တော့မယ့် ကလေးအတွက် ဆုတောင်းပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ